“လက်နှိပ်စက် တစ်လုံးနှင့် ထူးခြားလှတဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး၏ စွမ်းရည်” – Shwe Yaung Media
ဒီအကြောင်းတွေကို သင် သိပါသလားပထမဆုံး ဝိသိဋ္ဌ တိပိဋကဓရဖြစ်တဲ့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးဟာ တိပိဋကဓရ ရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲမှာ အခြားသောစာဖြေသံဃာတွေ မရှိတော့ရင် လက်နှိပ်စက်အသေးလေးနဲ့သာ ရိုက်ပြီးတော့
ဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့။လက်နှိပ်စက်လေးနဲ့ ရိုက်ဖြေခဲ့ပေမယ့် အခြားသူတွေလို လက်ချောင်းအစုံ အသုံးမပြုတတ်လို့ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းနဲ့သာ ရိုက်ဖြေခဲ့တာပါတဲ့။
သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း အဲဒီလို ရိုက်ဖြေခဲ့ပေမယ့် ပြင်ရာ ဖျက်ရာ အမှားတစ်လုံးမှ မပါသလို။ကျမ်းစာများအားလုံးကိုလည်းထိပ်တန်းဂုဏ်ထူးအမှတ်များနဲ့အောင်မြင်ခဲ့လို့ “မဟာတိပိဋကကောဝိဒ” ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ထူးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။(မဟာတိပိဋကကောဝိဒ
ဘွဲ့ကို ယခုအချိန်ထိ မည်သူမျှ မဆွတ်ခူးနိုင်သေးပါ။ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးနီးပါးဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သူမှာ ဒုတိယမြောက် ဝိသိဋ္ဌတိပိဋကဓရဖြစ်သည့် ပခုက္ကူ ဆရာတော် ဦးနေမိန္ဒ တစ်ပါးသာ ရှိခဲ့သည်။သို့သော် ရေးဖြေအပိုင်းတွင် ကျမ်းစာအချို့ဂုဏ်ထူးအမှတ်ကို
မမီသဖြင့် မရရှိခဲ့ပေ။အာဂုံတွင်မူ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့ တစ်လုံးမှ မထောက်ရသဖြင့် ဝိသိဋ္ဌဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
ပိဋကတ်သုံးပုံလုံးကို တစ်လုံးမှ မမှားအောင် ပြန်ဆိုနိုင်မှဝိသိဋ္ဌ ပေးသည်။ ရေးဖြေအပိုင်းတွင် ကျမ်းစာအားလုံး ဂုဏ်ထူးအမှတ်ဖြင့် အောင်မှ မဟာဘွဲ့ကို ပေးသည်။ဝိသိဋ္ဌ နှင့် မဟာ ဘွဲ့ နှစ်မျိုးလုံးကို မင်းကွန်း တိပိဋက ဆရာတော်ကြီးသာ ရဖူးသေးသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည်ဝိသိဋ္ဌတိပိဋကဓရနှင့် မဟာတိပိဋကကောဝိဒဘွဲ့တို့ကို လေးနှစ်နှင့် အပြီးအောင်ခဲ့သည်)ဆရာတော်ကြီး ပြုစုခဲ့တဲ့ မဟာဗုဒ္ဓဝင် စာအုပ်အတွဲကြီးတွေကိုလည်း ထို့အတူ လက်နှိပ်စက်အဟောင်းလေးနဲ့သာရိုက်ပြီးတော့ တစ်ပါးတည်း
ပြုစုခဲ့တာပါတဲ့။နိုင်ငံတော်က လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလှူဒါန်းပေမယ့် တစ်ပြားမှလက်မခံပဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့သာ ရိုက်နှိပ်ပြုစုပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရသို့ လွဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
မိမိအနေနဲ့ အဲဒီ မဟာဗုဒ္ဓဝင် စာအုပ်အတွဲကြီးတွေကို အခုချိန်ထိ တစ်အုပ်မှ ပြီးဆုံးအောင် မဖတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။(စာအုပ်အားလုံး အတော်ကို ထူပါတယ်)ဆရာတော်ကြီးတွေထဲမှာ အစားနည်းပြီး အလုပ်အများဆုံး လုပ်သွားတာကတော့ မင်းကွန်း
တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ကြီးသာ ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပေသတည်း။
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် – ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့